Jobpræmieordningen - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Jobpræmien dia aloa eo amin'ny farany miasa ny andro ny volanaNy payout ny jobpræmien mitranga ny volana araka ny karama voalaza fa ny fitantanana ny hetra. Raha toa ka voasarona ny tetika, dia tonga dia hahazo ny taratasy avy ny Payout ny Danemark alohan'ny. Ny volana jolay taona. Rehefa rakotry ny tetika, dia manana fahafahana hahazo ny hetra-vola maimaim-poana ao jobpræmie ho an'ny asa na tena asa ao anatin'ny fe-potoana. Jobpræmien dia ho nokajiana eo amin'ny fototry ny ny karama na tombontsoa avy amin'ny asa-tena.
Ny loka ho mitovy ny folo isan-jato
ny karama na ny mialoha ny hetra amin'ny tombom-barotra isan. Na izany aza, dia tsy afa-manao mihoatra noho ny get paid. Afaka mandray jobpræmie mandritra ny valo ambin'ny folo volana ny fe-potoana. aprily izay hatao ny taona, mba. Midika izany fa afaka mahazo hatramin'ny. Jobpræmien dia ny hetra maimaim-poana sy tsy misy fiantraikany ho an'ny asam-panjakana hafa. Afaka mahazo jobpræmie, raha toa ka dia rakotry ny jobpræmieordningen. Tsy maintsy tonga dia nandray taratasy avy ny Payout ny Danemark alohan'ny. Ny volana jolay taona, raha toa ka voasarona ny tetika. Ianao dia rakotry ny rafitra, raha toa ka efa foana ao amin'ny herinandro, ary mandritra izany fotoana izany no nandray ny fifanintsanana soa. Ankoatra izany, dia tsy maintsy efa nandray ny fifanintsanana soa, fara fahakeliny, ny efa-polo amby fito herinandro ny fe-potoana amin'ny herinandro, ary anisan'izany ny herinandro.
Na raha toa ka ianao ao amin'ny herinandro, tsy maintsy, fara fahakeliny, herinandro ny fe-potoana amin'ny herinandro, ary anisan'izany ny herinandro, miaraka: Raha, mandritra ny fe-potoana.
aprily izay hatao ny taona, mba. martsa hanatanterahany ny taona fisotroan-dronono na nafindra tany fahasembanana fisotroan-dronono, tany am-boalohany fisotroan-dronono, fleksydelse na ampahany ny fisotroan-dronono, intsony ho rakotry ny tetika.
Raha mihevitra ianao fa manan-jo ho rakotry ny jobpræmieordningen, fa tsy nahazo taratasy avy ny Payout Danemark, dia afaka mampihatra izany mba ho tafiditra ao anatin'ny rafitra.
Rehefa mitady ho adino ny mampiditra ny antontan-taratasy izay efa nandray ny asa.
Azonao atao ihany koa ny mangataka fieken-keloka amin'ny alalan'ny famenoana avy ny endriky ny ambany sy handefa azy ireo miaraka amin ny antontan-taratasy ilaina amin'ny Nomerika Mail na ny olon-tsotra paositra Fandoavam-bola Danemark.
Jobpræmien ho kajy ny fototry ny karama na ny tombom-barotra avy amin'ny asa-tena mialoha ny hetra.
Ny loka ho mitovy ny folo isan-jato. ny karama na ny tombom-barotra isan. Na izany aza, dia tsy afa-manao mihoatra noho ny get paid. Midika izany fa tsy mila manao na inona na inona mba hahazoana ny premium vola. Payout Danemark kajy ny jobpræmie ny fototry ny mpampiasa ny tatitra momba ny - Draharahan'ny hetra. Ianao mandray taratasy, isaky ny Payout ny Danemark dia afaka mahita fa ny mpampiasa dia nitatitra ny karama ny fitantanana ny hetra. Raha manana tombony avy amin'ny asa-tena any Danemark, na any ivelany (ny vondrona EOROPEANA - EEA-firenena na ny Soisa), na raha manana ny karama ho an'ny asa any ivelany (ny vondrona EOROPEANA - EEA-firenena na ny Soisa), ianao dia tsy maintsy mikatsaka ny hahazo jobpræmie karama. Ny voalohany, dia afaka mahazo karama jobpræmie, dia ny faran'ny volana aogositra taona. Jobpræmien ho kajy ny karama, izay voalaza fa ny fandoavan-ketra ny fitantanana ny volana aprily taona sy jolay taona. Izany dia jobpræmien aloa isaky ny. Ianao hahazo ny premium vola, ny volana araka ny mpampiasa dia nitatitra ny karama.
Ohatra: raha toa ka ny mpampiasa dia nitatitra ny karama ny hetra fitantanana tamin'ny oktobra, mahazo jobpræmien karama farany raharaham-barotra andro ny volana novambra.
Izany dia midika ihany koa fa raha toa ka ny mpampiasa ny tatitra momba ny karama ho an'ny volana oktobra tamin'ny novambra, ianao ihany no mahazo ny premium vola tamin'ny volana desambra. Rehefa mahazo karama jobpræmie, dia handray taratasy avy ny Payout Danemark, izay afaka mahita ny fomba maro ianao nahazo karama, ary ny fomba ny premium dia ny kajy. Mba hahazoana karama jobpræmie tsy maintsy manana ny karama noho ny asa na ny tombom-barotra avy amin'ny asa-tena. Raha mahazo flekslønstilskud toy ny fanampin ny karama, dia afaka mahazo jobpræmie ny karama, fa tsy amin'ny flekslønstilskuddet. Ianao hahazo ny fanampiana ara-bola ho an'ny asa-tena, satria tsy maintsy maharitra sy manan-danja ny fampihenana ny fahaiza-manao, dia afaka mahazo jobpræmie ny tombom-barotra, fa tsy ny anie. Manana fahafahana hahazo jobpræmie ny handoavana ny asa amin'ny hafa EU - EEA-firenena na ny Soisa, raha toa ka mandoa hetra amin'ny karama ao Danemarka. Tsy mahazo tonga dia aloa avy jobpræmie, rehefa miasa any ivelany, ka tokony na hitady ny premium amin'ny Fandoavam-bola Danemark. Mitady momba jobpræmie amin'ny alalan'ny famenoana ny nomerika sy ny fampiharana hametahana ny antontan-taratasy ilaina. Azonao atao ihany koa ny fikarohana ny amin'ny alalan'ny famenoana avy ny endriky ny ambany sy handefa azy ireo miaraka amin ny antontan-taratasy ilaina amin'ny Nomerika Mail na paositra ny olon-tsotra ny Fandoavam-bola any Danemark. Rehefa mitady ny momba jobpræmie ho an'ny asa any ivelany, ny kajy ny Payout Danemarka ny jobpræmie ny fototry ny ampiarahina amin'ny antontan-taratasy. Mahazo jobpræmien karama avy hatrany rehefa avy ny Fandoavam-bola any Danemark no ampiasaina ny fampiharana. Manana fahafahana hahazo jobpræmie ho an'ny tombom-barotra avy amin'ny asa mahaleo tena raharaham-barotra ao Danemarka na hafa EU - EEA-firenena sy Soisa, raha toa ka mandoa hetra amin'ny tombom-barotra ao Danemarka. Tsy mahazo tonga dia aloa avy jobpræmie, raha manana tombony avy amin'ny hetsika ny miasa tena raharaham-barotra, noho izany dia tokony mihitsy aza hitady ny premium amin'ny Fandoavam-bola Danemark. Rehefa mitady ny momba jobpræmie ny tombom-barotra avy amin'ny asa-tena, ny Fandoavam-bola Danemark taty aoriana kajy ny premium eo amin'ny fototry ny hetra isan-taona hiverina. Rehefa mitady ny momba jobpræmie ny tombom-barotra avy amin'ny asa-tena any ivelany, dia tsy maintsy hametahana ny antontan-kevitra ao amin'ny tombom-barotra, fx ny kaonty, ary koa ny taratasy fanamarinana avy ny fandoavan-ketra ny fitantanana ny hetra madio. Payout Danemarka ny kajy dia ny jobpræmie amin'ny ny fototry ny ampiarahina amin'ny antontan-taratasy. Mahazo jobpræmien karama avy hatrany rehefa avy ny Fandoavam-bola any Danemark no ampiasaina ny fampiharana. Mitady momba jobpræmie amin'ny alalan'ny famenoana ny nomerika sy ny fampiharana hametahana ny antontan-taratasy ilaina.
Azonao atao ihany koa ny fikarohana ny amin'ny alalan'ny famenoana avy ny endriky ny ambany sy handefa azy ireo miaraka amin ny antontan-taratasy ilaina amin'ny Nomerika Mail na ny olon-tsotra paositra Fandoavam-bola Danemark.
Raha misy olona hafa tokony hanampy anao hahazo mikasika ny Fandoavam-bola Danemark, anao dia voalohany indrindra tsy maintsy hanome ny olona ny herin ny mpisolovava. Izany dia mihatra ihany koa, eny fa na miara-miaina, ary ny hafa fotsiny mila miresaka amin'ny Fanafoanana ny Danemark eo ny raharaha. Raha toa ka tsy maintsy hanampy olon-kafa eo amin'ny fifandraisana amin'ny Fandoavam-bola Danemark, dia voalohany indrindra tsy maintsy manana ny fahefana ny mpampanoa lalàna.
Izany dia mihatra ihany koa, eny fa na miara-miaina, ary fotsiny ianao mila miresaka amin'ny Fanafoanana ny Danemark eo ny raharaha.
Rehefa ianao hametraka ny fampiharana, izany dia ho tsinjaraina amin'ny alalan'ny Fandoavam-bola Danemark. Sagsbehandlingsfristen ho fampiharana ny jobpræmieordningen dia efatra herinandro avy ny andro ny Fandoavam-bola any Danemark dia nandray ny fampiharana. Payout Danemark dia eo ho eo amin'ny telo herinandro ny fandraisana ny fangatahana. Afaka manampy mba hahazoana antoka fa ny fampiharana no azo tsinjaraina araka ny ela araka izay azo atao.
Mba hanaovana izany, hametahana ny taratasy ilaina ary manao azo antoka fa ny vaovao ao amin'ny hisoratra anarana marina.
Ny sagsbehandlingsfrist no fetra, toy ny Fandoavam-bola any Danemark dia nanome ho an'ny mandra-pahoviana no tsy maintsy atao mba hahatonga ny fanapahan-kevitra.
Sagsbehandlingsfristen sy ny eo ho eo ny fanodinana ny fotoana dia tapa-kevitra mifototra amin'ny ny fotoana tsy ara-dalàna maka ny dingana isan-jato.
ny fangatahana, ny Fandoavam-bola any Danemark. Payout Danemark hamaly haingana araka izay azo atao. Raha efa voasoratra ny Payout Danemark, dia afaka manantena ny mba hahazo valiny ao anatin'ny roapolo andro fiasana. Raha toa ka afa-po, dia tonga soa ianao mba hifandray ny Payout Danemark.
Raha tsy miombon-kevitra tamin'ny fanapahan-kevitra, dia manana fahafahana mitaraina mikasika izany.
Payout ho an'ny Danemark mba manana ny fitarainana ao anatin'ny efa-bolana rehefa avy nandray ny fanapahan-kevitra.
Đảng chính trị ở Đan mạch, miễn phí tiếng việt